Tutankhamun chiratidzo chinoshamisa vhidhiyo slots mutambo une 5 Gwenzi uye 20 paylines. Chakasimudzira kuzodzosera akashanyira muEgipita-kwakavakirwa dingindira cheap car insurance uye anoshandisa zviratidzo vekare kuzokutora Unobata yakakura.
Paiva Farao muEgipita, uyo akavigwa vapenyu uye rufu urwu chisinganzwisisike sezvayakawanikwa mugore 1922 kubudikidza Howard Carter.
Unogona kunyoresa mahara pa Coinfalls Casino uye kutamba mutambo uyu uye vanakidzwe kwazvo nomufaro pakiti 200% pamusoro kwokutanga dhipozita pamusoro £ 50,00. Uyezve, nesuwo tine pavhiki uye pamwedzi kushambadza akadai Game of Day, Cashback zuva, uye No rubatso bhonasi akuchengete wakabatikana.
Chinogadzirisa Games ndivo software Provider nokuda Tutankhamun slots mutambo. The Graphics uye Gameplay somukombe. mugadziri ichi yave mazano mitambo vane unhu zvikuru uye kwave serakaoma mhinduro kubva vatambi.
Tutankhamun Video slots anogona kuridzwa ari kutamba zvokungonakidzwa pana Coinfalls Casino. All iwe kuita vanoisa vachitamba mari kubva 0.01p kusvika £ 100.00. Kamwe iwe vakaisa vachitamba yarova kuruka bhatani uye vanogamuchira mibayiro yakakwirira.
Mutambo ine akaderera ukoshi zviratidzo zvakadai 10, 9, J, Q, A, uye K izvo kuzvitenga kwauri multiplier mibayiro anosvika x80. It anoshandisawo rokumusoro ukoshi zviratidzo zvakadai seruva, vhasi, Ziso Horus, uye Gold chiratidzo.
zviratidzo izvi vanofanira kuonekwa mune mubatanidzwa matatu kana kupfuura zvino unogona kutarisira kuwana kuti x1, 000 multipliers. Mask The waFarao anomiririrwa somufananidzo dzomusango zvichiita kuti kuhwina mujinga jackpot huwandu x40, 000.
Chikara chiratidzo kuchaitawo kuisa dzose mifananidzo pamusoro Gwenzi kunze Kuparadzira Logo. Uchigonawo kukunda mamwe multipliers akafanana x10, 000, x500, x100, uye x40.
The vakasununguka Tunoruka inoratidza chichange kusashanda rekukwazisa pane uparadzire mifananidzo yacho chero paTV iyo achaidya iwe 15 vakasununguka Tunoruka pamwe multiplier pamusoro x3. Izvi yekare kutarira vanodzungunyika mutambo chinokwezva whopping RTP pamusoro 95.39% uye hakuna chinhu Autoplay muoti rinowanikwa mutambo uyu.
Tutankhamun slots ndiwo unopa mutambo kuti zvingabatsira pechingoro jackpot uwandu. The Graphics uye Mumhanzi zviri pamusoro notch yepamusoro. Register zvino playing yedu kutamba slots ichi chinofadza mutambo uye kunakidzwa welcome bhonasi pamusoro 200% uri dhipozita rokutanga.